Maimaim-poana video tutorial amin'ny teny norvejiana fahaiza-manao - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Free video lesona amin'ny zavatra amin'ny Natalia Markova fa na iza na iza te-hanomboka amin'ny fitenyIanao dia hianatra ny fomba feo nandamina sy ny teny norvejiana, nahoana ny Norwegians hahatakatra ny mpifanolo-bodirindrina aminy avy any Danemarka sy Soeda, ahoana no mba hampahafantatra ny tenanao ao amin'ny zavatra sy ny inona no ataonao Norwegians amin'ity faran'ny herinandro ity. Ity lesona ity dia ny fahafahana lehibe hahazo nahalala ny asa ny Tavaratra club, ny mpampianatra, ny rivotra sy ny endrika.
Lehibe miampy fa na iza na iza no handeha hianatra zavatra izany: mahafantatra ny teny, dia afaka hahatakatra ny mpiara-monina ny Mponina sy ny Swedes.
Aorian'ny fisoratana anarana ianao dia hahazo ny fidirana amin'ny kaonty manokana, izay ao amin'ny lisitra misy antokony dia asehoy foana ity video tutorial dia amin'ny teny norvejiana.
Natalia Morozova ny diplaoma ny anjerimanontolom-panjakana ao Maosko, ho mpampianatra ny zavatra teny sy ny literatiora amin'ny roa-polo taona.
Indroa nandray anjara tamin'ny fanofanana ho mpampianatra ny zavatra ao amin'ny Oniversiten'i Agder.
Ankoatra ny fandikan-teny amin'ny zavatra anjara: boky-boky Siegfried mandeha ny Torimaso, ny tantara an-tsary momba azy ireo, zavatra kely ny tantara. Ao ny roa-polo-Natalia namoaka ny mpanoratra ny tena fampianarana amin'ny teny norvejiana. Fitenenana, ny mpahay tantara, philologists, mpahay tantara, iza no afaka fiara sy ny kilalaon'afo mba hiresaka momba ny"moyen age", ny Vikings sy ny manodidina. An-tserasera antokony amin'ny siansa mahaolona sy ny fiteny fitongilanana: ny Pianakaviana fiteny, tamin'ny Moyen âge ny fianarana, ny angano, ny maritrano sy ny manodidina.
संग्रहालय व्हिडिओ गप्पा कला आहे यावी संबंध
narahi-toerana Fiarahana ho zava-dehibe ny hahafantatra sary mampiaraka lahatsary mahafinaritra ho an'ny ankizy velona stream ankizivavy olon-dehibe Mampiaraka toerana video Mampiaraka ny vehivavy online video Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat roulette girl ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka ny ankizivavy maimaim-poana amin'ny aterineto